Vaovao - ireo mpanamboatra tariby vita amin'ny bimetallika matanjaka indrindra ao Shina
Ireo mpanamboatra mahery vaika tariby misy verinia bimetallika any Sina
Ny orinasanay SUZHOU WUJIANG SHENZHOU BIMETALLIC CABLE CO., Dia miorina ao amin'ny Delta Renirano Yangtze ary akaikin'ny Farihy Taihu. 110km miala an'i Airport Hongqiao International Shanghai any Atsinanana, 120km miala ny Farihin'i Hangzhou Xizi any Andrefana ary 50km miala ny tanàna taloha Suzhou any avaratra. Tena mety ny fitaterana. Manokana amin'ny famokarana tariby bimetallika mifangaro toy ny tariby vita amin'ny alim-by vita amin'ny varahina, tariby magnesium aluminium mitazona varahina ary tariby vita amin'ny aluminium vita amin'ny varahina, io no iray amin'ireo mpanamboatra mahery vaika tariby bimetallika any Shina.
Ny fepetra manokana momba ny vokatra bimetallika an'ny orinasa dia manomboka amin'ny 0.10mm ka hatramin'ny 5.00mm. Orinasa midadasika amin'ny orinasa iray ihany izy io. Izy io dia manana maherin'ny 200 andiana milina fanaovana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha, lafaoro tsy misy fangarony maharitra lafaoro, fatana fandoroana firakotra ary fitaovana hafa, milina enina haingam-pandeha 10 haingam-pandeha ary tsipika famokarana 54. Amin'izao fotoana izao dia afaka mamokatra tariby alimo alimo mitafy varahina miisa 200 taonina isam-bolana mahery izy io. Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny tariby vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina (tariby enina), miaraka amin'ny famaritana manomboka amin'ny 0.10-5.50mm; Ny tariby manezioma alimandy mitafy varahina mitafy varahina, miaraka amin'ny masontsivana manomboka amin'ny 0.10-3.50mm sy ny fahombiazana tena tsara, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny electromagnetic, coil inductive, coaxial cable, RF tariby, tariby mivoaka, tariby fampitana signal matetika, tariby herinaratra, fifehezana tariby sy saha hafa.
Ny orinasa dia nandalo ISO9001 sy IS014001 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ary nanangana rafitra fitantanana kalitao sy fitantanana tontolo iainana tonga lafatra; Mandritra izany fotoana izany dia mampiditra fitaovana fanamboarana mandroso izy ary manana fitaovana fitiliana tonga lafatra hahatonga ny vokatra novokarin'ny orinasa hihaona amin'ny fenitra SJ / T11223-2000. Manaraka ny politikan'ny mpandraharaha "ny fahavelomana amin'ny kalitao, ny fivoarana amin'ny siansa sy ny teknolojia ary ny tombony azo avy amin'ny fitantanana", ary manantena am-pahatsorana ny hametraka fiaraha-miasa maharitra, fiaraha-miombon'antoka tombony ary fiaraha-miombon'antoka amin'ny fandrosoana miaraka amin'ireo mpanamboatra tariby maro eto an-toerana sy any ivelany!